ကုလားထိုင် | RayHaber | raillynews
ရာသီအတွက်အဆင်သင့် Salda နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း
Salda နှင်းလျှောစီးစင်တာ၏ 900 အမြင့်ကိုအပေါ်စီးကနေ Burdur ရှိ Salda ရေကန်ရာသီစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်လ်ဒိုက် 1 သန်း 400 တထောင်လူများ, ဆောင်းတွင်းရာသီသွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်နွေရာသီမှာတော့တူရကီဆားထဲမှာအိုင်ကဆိုပါတယ် [ပို ... ]
Hakkari Merga Butane နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာသည်နှင်းလျှောစီးအားသန်သူများအားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
Hakkari ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့တော်ဝန်İdrisAkbıyıkတို့သည် Merga Bütanနှင်းလျှောစီးစင်တာ၏ဥယျာဉ်နှင့်ရေကန်areaရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးAkbıyıkသည်သူသွားရောက်ခဲ့သောနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းရှိနှင်းလျှောစီးနှင့် piste areaရိယာသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးနှင့်သာတူရကီ၌စက္ကန့်အတွင်း66 ဘို့လူတထောင်ကလူ seating နှင့်အတူသစ်ကိုအဆောက်အဦများနှင့်တစ်နာရီနှင့်ပိတ်ထားသောအခန်းနှုန်း3မီတာမှတူရကီÖksüz, Sarıkamışနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ Kars ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, [ပို ... ]
Hakkâri၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး risdris Akbıyıkက 2.500 အမြင့်နှင့် Merga Butan Ski စင်တာတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Akbiyik၊ အစိုးရရှေ့နေချုပ် Mustafa Balik၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mustafa Duruk, [ပို ... ]
စစ်တပ်၏2အမြင့်တစ်ထောင်Çambaşı Plateau 650 သည်အလှည့်အပြောင်း၌တည်ဆောက်ခဲ့သောÇambaşıဆောင်းရာသီအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီးစင်တာလေ့ကျင့်ခန်းသည်အမှန်တရားကိုမရှာဖွေခဲ့ပါ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၌တပ်မတော် Metropolitan မြူနီစီပယ်ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ [ပို ... ]
Davraz တောင်တန်းဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတွင်5အမှတ်စက်မှုစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦတင်ဒါရလဒ်များ
Davraz တောင်တန်းဆောင်းရာသီအားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ5စက်ရုံနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များဆောက်လုပ်ခြင်း (overhead power transmission လိုင်းများနှင့်အပိုထပ်ထရန်ထရန်စဖော်မာပစ္စည်းများ) ကိုစာချုပ်ချုပ်ခြင်း Isparta အထူးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု [ပို ... ]
ကျင်းပSarıkamışနှင်းလျှောစီး Center ကနှင်းလျှောစီး LIFT လေလံ
Sarikamis Ski Centre Chairlift တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း -3နိုဝင်ဘာလတွင်လေလံတင်ခဲ့သော Sarikamis နှင်းလျှောစီးစင်တာ Chairlift ကို2လများအပြီးတွင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းစတင်မည်ဖြစ်သည်။ Sarikamis Cibiltepe နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း2။ စက်တင်ဘာလစင်မြင့် 13 ၏ဘူတာရုံမှာ [ပို ... ]
အရေးပေါ် Trabzon ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးရှာဖွေခြင်း
Trabzon အရေးပေါ်ကေဘယ်လ်ကားဆောက်လုပ်ရေးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှာဖွေခြင်း: နောက်နှစ်အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက် Trabzon 2504 Çakırgölမြင့်ကုန်းပေမယ့်ပျောက်ဆုံးပြီးပါကတစ်ဦးအကြီးလမ်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်းကေဘယ်လ်ကားစေမည် .. [ပို ... ]
Trabzonspor Davraz စခန်း (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို sightseeing သွင်းယူ
Trabzonspor Davraz စခန်းသည်ကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းအားဖြင့်အလေးထားခဲ့သည်။ ယနေ့ရာသီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေစဉ် Trabzonspor Isparta Davraz စခန်း၊ Isparta Davraz တွင်ရာသီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများ [ပို ... ]
Leitner တူရကီအကြောင်း ...
Bursa အတွက် 24 2012 မေလ LEITNER ခုနှစ်တွင်တူရကီတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Bursa, တူရကီအတွက်ကေဘယ်လ်ကားကဏ္ဍတွင် Leitner ရဲ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ LEITNER ropeways သုံးခုအဓိကဒေသများရှိတူရကီအတွက်ရှေ့မှောက်မှရောက်လေပြီ။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်: [ပို ... ]
မီးရထားလမ်းစနစ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို VAT မှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်။ 2023 ၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြုလုပ်မည့်ရထားလမ်းစနစ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို VAT မှကင်းလွတ်စေလိမ့်မည်။ 2023 စီမံကိန်းများ၏နယ်ပယ်အတွင်းရထားလမ်းစနစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်အစိုးရမှ VAT ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည့်မက်လုံးမှမြူနီစီပယ်များသည်လည်းအကျိုးခံစားရမည် [ပို ... ]
အဆိုပါ chairlift ကဘာလဲ?
ကုလားထိုင်ကဘာလဲ? နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်သူများမှာအများအားဖြင့်ကုလားထိုင်များဖြစ်ပြီးစခန်းများနှင့်အခြေချနေထိုင်သူများအကြားအလုပ်လုပ်သူများသည်အများအားဖြင့်အခန်းငယ်များဖြစ်သည်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ [ပို ... ]